अस्ट्रेलियामा दशैंको टीकाको साइत कहिले ? » Nepalese Australian
अस्ट्रेलियामा दशैंको टीकाको साइत कहिले ?
सिड्नी । अन्र्तराष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले अस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरुका लागि यस बर्षको बडादशैंको टीकाको साइत सार्वजनीक गरेको छ ।
२६ अक्टोवरमा रहेको बडादशैंमा अस्ट्रेलियाको सिड्नी, मेलबर्न र ब्रिजवेनमा छुट्टा छुट्टै साईतको समय जुरेको छ । सिड्नीमा बिहान ९ः४३, मेलबर्नमा ९ः५३ र ब्रिजवेनमा ९ः५१ मा साइतको टीका लगाउन सकिने अन्र्तराष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले सार्वजनीक गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख ।
अन्र्तराष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समितिका सभापति प्रध्यापक डा.माधव भट्टराई र सदस्य सचिव आचार्य सन्तोष वाशिष्ठ द्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “विभिन्न देशमा बसोवास गर्ने नेपालीहरुले बडादशैंको टीको साइतको समय मागको आधारमा साइतको समय सार्वजनीक गरिएको हो ।”
कस्तो छ अस्ट्रेलियामा दशैंको चहलपहल ?
कोरोना भाइरस नियन्त्रण नजिक पुगेको अस्ट्रेलियाको सिड्नी र मेलबर्नका नेपालीहरुमा दशैंको माहौल बनिसकेको छैन । मेलबर्नमा कोरोना भाइरस पूर्ण रुपमा नियन्त्रण नहुँदा यस बर्षको दशैं नेपाली समूदायले खुलेर मनाउन पाउने छैनन् ।
नेप्लिज एसोसिएसन अफ भिक्टोरिया अध्यक्ष राम गुरु का अनुशार दशैं लक्षित सार्वजनीक कार्यक्रमहरु यस बर्ष नगरिने बताए । तिहारमा पनि देउसी भैलो कार्यक्रम अनलाईन माध्यमबाटनै गरिने गुरुङले बताए ।
तर,अस्ट्रेलियाको उत्तरी क्षेत्रमा भने दशैंको रौनक शुरु भएको छ । अस्ट्रेलियाको नर्दन टेरिटोरीमा अक्टोबर दशमा दशैं महोत्सव हुँदैछ भने त्यस क्षेत्रमा दशैंको उपलक्क्षमा खेलकुदका कार्यक्रमहरु पनि रहेको नेप्लिज एसोसिएसन अफ नर्दन टेरिटोरीका अध्यक्ष युवराज पन्तले जानकारी दिए ।
यता तास्मानिया राज्यमा कोभिड संक्रमितको संख्या शुन्य भएपछि यसबर्षको दशैं यहाँ बसोवास गर्ने नेपाली समुदायले खुलेर मानाउने भएका छन । यो राज्यमा नेपाली समूदायले दशै लक्षित विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गदैछन । व्रिजवेनमा दशैं मनाउन सहज हुने देखिएको छ । यहाँ पनि नेपाली समूदायले दशैंका कार्यक्रमहरु आयोजना गरिरहेका छन् ।
पश्चिम अस्ट्रेलिया पर्थ र क्यानवेरामा पनि दशै सहज हुँदैछ । किनकी यी राज्यहरुमा कोभिड संक्रितको संख्या शुन्य छ । साउथ अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरुले पनि दशैं रमाईलो गरिनै मनाउन पाँउने छन । किनकी यो राज्यमा लकडाउनका सवै नियमहरु खुला भइसकेका छन ।
विभिन्न राज्यमा पुगि आफन्तको टीका थाप्न भने अस्ट्रेलियाका नेपालीहरुलाई यस अघिका दशैं जस्तो सहज देखिदैन । साउथ अस्ट्रेलियाले सिड्नीसँगको यात्रा प्रतिबन्ध खुला गरेपनि सिड्नीमा संक्रमितको संख्या घटबढ भइरहदा यात्रुमा त्रासनै देखिन सक्छ । सिड्नीमा बसोवास गर्ने नेपालीहरुले क्याबेरामा रहेका आफन्तसँग भने टीका थाप्न सहज हुनेछ ।
Wednesday 27th of October 2021 12:06:13 PM